Wasiirada Adeega Bulshada oo ka qeybgashey Shirka Horumarint Waxbarashada oo lagu qabtey dalka Tuniisiya – idalenews.com
Wasiirada Adeega Bulshada oo ka qeybgashey Shirka Horumarint Waxbarashada oo lagu qabtey dalka Tuniisiya
Wasiirka wasaaradda adeega bulshada ayaa ka qeyb gashay Shirweynaha 21 aad ee ururka dalalka carabta u qabilsan dhanka, waxbarashada sayniska iyo hiddaha marka la soo gaabiyo loo yaqaano (Alecso) ayaa lagu qabtay dalka Tuniisiya caasimadiisa Tuunis waxaana looga hadlay ajandeyaal badan.
Kulanka oo ay ka qeyb gashay wasiirka wasaaradda adeega bulshada ayaa waxaa yaabihii looga hadlay waxaa ka mid ahaa hormarinta waxbarashada dalalka carabta, soo celinta hidaha iyo dhaqanka carabta, doorashada xoghayaha guud ee urukaasi iyo qodobo kale.
Wasiirka Horumarinta adeega Bulshada oo halkaasi ka jeedisay hadal dheer oo taabanayey baahida dhanka waxbarashada ee ka jirta dalka Soomaaliya ayaa waxa ay waddamada carabta ka codsatay in dalka loo qoondeeyo sanduuq gaar ah oo lagu maalgeliyo dhinacyada horumarinta waxbarashada iyo in gacan laga geysto dib u dhiska iskuulada.
Mas’uuliyiintii ka qeyb gashay kulanka ayaa soo dhaweeyay hadalkii ay jeedisay wasiirka adeegga bulshada xukuumadda Soomaaliya iyagoona sheegay in ay si weyn u taageerayaan dowladda Soomaaliya.
Shirweynuhu wuxuu kaloo guda galay doorashada madaxdii isu soo sharaxday jagada Xoghayaha Guud ee Alecso, waxayna musharixiintu ka kala socdeen, dawladaha Ciraaq, Kuwait, Tuniisiya iyo Muritaaniya, waxaana doorashada oo sir aheyd ku guuleeystay masuulkii ay soo sharxatay dawladda Kuwait.
Inta uu socday shirkaas wasiirku waxay kullamo gaar gaar ah la qaadatay, wasiirka waxbarashada Kuwait, Maamulaha Machadka afka Carabiga Khartoum ee caalamiga ah machadkaasoo dadka aan carabiga ku hadlin waxbara, waxay kaloo wasiirku la kullantay ergeyga ka socday jaamacadda Carabta, sidoo kale waxay kullan la qaadatay xoghayaha Guud ee ururka Islaamka dhanka waxbarashada, Hiddaha iyo Sayniska iyo madax kale oo shirka joogay iyagoona ka wada hadlay xoojinta xiriirka.
Wasiirka waxaa ku wehliyay ka qeybgalka shirkaas, agaasimaha waaxda Tacliinta Sare Ismaaciil Yuusuf Cusmaan iyo Xoghayaha guud guddiga qaranka ee dhanka waxbarashada, Hiddaha iyo Sayniska mudane Cisaam Xuseen Muuse.
Dhageyso: Madaxweyne Xasan “Dadka Reer Kismaayo Dowlada ay ka tirsanaan doonaan”
Daawo: Natiijada Golaha Deegaanka iyo cida noqoneysa Mayor Magaalada Saylac oo dood kulul ka dhex dhalisey gudaha Somaliland